Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် ချည်ထည်ဆေးဆိုးစက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် ချည်ထည်ဆေးဆိုးစက် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ACME MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့မှုကိုအထူးပြုနေ ချည်ထည်ဆေးဆိုးစက်ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan။ အဓိကအားဖြင့်ဒီထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်တော်တို့ကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်မှုအားဖြင့်သင်တို့ကိုပေးဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီထုတ်ကုန်သစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်းသင့်ကိုကူညီနိုင်ပါ။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ကောင်းမွန်စွာကမ္ဘာပေါ်တွင်တွင်ရောင်းချလျက်ရှိကြ၏ ဖောက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူမြင့်မားကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။
အလွန်နိမ့်အရက်အချိုး 1:4~7,၎င်းသည်ဆိုးဆေးအသုံးပြုမှုကိုလျော့နည်းစေသည်,ဓာတုပစ္စည်း,စွမ်းအင်,ရေ&effluent ကုသမှု၏ကုန်ကျစရိတ်.
အထူးဆိုးဆေးပြွန်နှင့် nozzle တည်ဆောက်မှုတို့သည်အထည်ထိတွေ့မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်&တွန့အမှတ်အသားများဖယ်ရှားပစ်.
အပြည့်အဝလျှံ nozzle pilling သေချာ-ပိတ်ထည်နည်းသည်.
ဒါကြောင့်ပျော့ပျောင်းသောစီးဆင်းမှုဆိုးဆေးစနစ်ကထွက်ခွာသောအခါထည်ဆိုးဆေးပြွန်ထဲမှာဖြန့်သည်&မည်သည့် plaitdown ယန္တရားမရှိဘဲဆေးဆိုးခန်းထဲသို့ချောချောမွေ့မွေ့ drop.ယင်းကြောင့်စက္ကူလည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းပုံမှန်မဟုတ်သော်လည်းပုံမှန်မဟုတ်သောစည်များကိုဆေးဆိုးသည့်အခန်းတွင်သိုလှောင်ထားသည်.ဤသည်ကိုလည်းတွန့်အမှတ်အသားများကနေတားဆီး.
အဓိကပိတ်ထည်များနှင့်တင်းမာမှုနိမ့်စောင်ရေများ၏တားဆီးကာကွယ်တားဆီးဖို့အပြည့်အဝလျှံ nozzle နှင့်အတူတပ်ဆင်ထား lycra ပိတ်ထည်၏အကောင်းဆုံး elasticity ရရှိ.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/cotton-dyeing-machine.html
ချည်ထည်ဆေးဆိုးစက် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ ချည်ထည်ဆေးဆိုးစက် ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ ချည်ထည်ဆေးဆိုးစက် ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan